Funny Archives - Shwe Khit
October 18, 2021 by Zaw Hein
ဆရာတော် ဦးသောဘိတဟာ တရားနာသူတိုင်းကိုဟောရင် ယသော်ဓယာ ချွတ်ခန်းပဲ ဟောပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူ့ရွာသူ၊ရွာသားတွေက သူ့ကိုဆွမ်းကပ်ရင် ဘဲဥပြုတ်နဲ့ပဲ ကပ်ကြလို့တဲ့။
၃နှစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ အဲသလိုနေခဲ့ကြတာ ကြာလာတော့ ဒါယကာဖြစ်သူ
သူ့မင်္ဂလာပွဲမှာ ဦးဇင်းကို ပင့်ဖိတ်မှာလေ။ ဦးဇင်းဘုရာ့ တရားလေး ဘာလေး ပြောင်းဟောပါဦးဘုရာ့ အမြဲတန်း ယသော်ဓရာချည်းပဲ ချွတ်နေတယ်။
“အိမ်းလေကွာ မင်းတို့ကလည်းငါ့ကို ဆွမ်းဟင်းတစ်မျိုးတည်းပဲ ကပ်နေတာကိုးကွ ဟင်းပြောင်းကပ်ပေးရင် တရားပြောင်းဟောပေးမယ်”
သြော်ဂလိုကိုး… စိတ်ချပါဘုရာ့ ဆွမ်းဟင်းပြောင်းကပ်ပေးပါ့မယ် ဘုရာ့
ဒီလိုနဲ့…. နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူညီမှုရပြီး မင်္ဂလာပွဲနေ့ ရောက်ရောပေါ့။
ဦးဇင်းသောဘိက ဆွမ်းကိုအရင်ကပ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ သေချာမှ တရားပြောင်းဟောမှာလေ။ သူ့ကိုပတ်လို့မရဘူး။ ဆရာတော်ဆိုတာ အချဉ်မှမဟုတ်တာ။
မောင်ကျော်ကြီးက ဘုန်းကြီးကို ဆွမ်းကပ်တော့ ဘဲဥချဉ်ရည်ဟင်းတဲ့။ 😣😣😣 ဘုန်းကြီးမျက်နှာပျက်သွားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြိတ်မှိတ်ပြီး ဘုန်းပေးရတာပေါ့လေ။ ဆွမ်းစားပြီးလို့ တရားလည်းပေးရော ဘုန်းကြီးက စကားစလိုက်ပါတယ်။
“ကိုင်း… ဒီနေ့တော့ မောင်ကျော်ကြီးရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာ တရားသစ်ချီးမြှင့်ပေးပါမယ်…. ”
ဘာတရားအသစ် ချီးမြှင့်မှာတုန်းဘုရာ့ “အိမ်း…. ရာဟုလာမယ်တော် ချွတ်ခန်း” ဟင်…😖😖😖😖 ဦးဇင်းကလည်း ယသော်ဓရာချွတ်ခန်းနဲ့ ရာဟုလာမယ်တော်ချွတ်ခန်း အတူတူပဲလေဘုရာ့။ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးလိုပဲလေဘုရာ့။
“အိမ်း….. မင်းပဲအပြောကောင်းတယ်။ မင်းကိုဆွမ်းဟင်း ပြောင်းကပ်ခိုင်းတာကြတော့ ဘဲဥပြုတ်ကနေပြီး ဘဲဥချဉ်ရေဖြစ်သွားတယ်…. ဥချင်းတော့ တူတူပဲလေ”😏😏😏😏😏
ဆရာတော် ဦးသောဘိတဟာ တရားနာသူတိုင်းကိုဟောရင် ယေသ္ဓာယာ ချြတ္ခန်းပဲ ဟောပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူ့ရြာသူ၊ရြာသားတြေက သူ့ကိုဆြမ်းကပ်ရင် ဘဲဥျပုတ္နဲ့ပဲ ကပ်ကြလို့တဲ့။
၃နွစ်လောက်ကြာတဲ့အထိ အဲသလိုနေခဲ့ကြတာ ကြာလာတော့ ဒါယကျာဖစ်သူ
သူ့မဂင်္လာပြဲမွာ ဦးဇင်းကို ပင့်ဖိတ္မွာလေ။ ဦးဇင်းဘုရာ့ တရားလေး ဘာလေးျေပာင်းဟောပါဦးဘုရာ့ အမြဲတန်း ယေသ္ဓာရာခ်ည်းပဲ ချြတ်နေတယ်။
“အိမ်းလေကြာ မင်းတို့ကလည်းငါ့ကို ဆြမ်းဟင်းတစ္မ်ိုးတည်းပဲ ကပ်နေတာကိုးကြ ဟင်ျးေပာင်းကပ်ပေးရင် တရာျးေပာင်းဟောပေးမယ်”
သြေ္ဂာလိုကိုး… စိတ္ခ်ပါဘုရာ့ ဆြမ်းဟင်ျးေပာင်းကပ်ပေးပါ့မယ် ဘုရာ့
ဒီလိုနဲ့…. နွစ်ဦးနွစ္ဘက် သေဘာတူညီမှုရပြီး မဂင်္လာပြဲနေ့ ရောက်ရောပေါ့။
ဦးဇင်းသောဘိက ဆြမ်းကိုအရင္ကပ္ခိုင်းလိုက္ပါတယ်။ သေခ်ာမွ တရာျးေပာင်းဟောမွာလေ။ သူ့ကိုပတ္လို့မရဘူး။ ဆရာတ္ဆောိုတာ အခ်ဉ္မွမဟုတ္တာ။
မောင်ကေ်ာ်ကြီးက ဘုန်းကြီးကို ဆြမ်းကပ်တော့ ဘဲဥခ်ဉ်ရည်ဟင်းတဲ့။ 😣😣😣 ဘုန်းကြီးမ်က္နွာပ်က်သြားတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြိတ္မွိတ်ပြီး ဘုန်းပေးရတာပေါ့လေ။ ဆြမ်းစားပြီးလို့ တရားလည်းပေးရော ဘုန်းကြီးက စကားစလိုက္ပါတယ်။
“ကိုင်း… ဒီနေ့တော့ မောင်ကေ်ာ်ကြီးရဲ့မဂင်္လာပြဲမွာ တရားသစ္ခ်ီျးမှင့်ပေးပါမယ်…. ”
ဘာတရားအသစ် ခ်ီျးမှင့်မွာတုန်းဘုရာ့ “အိမ်း…. ရာဟုလာမယ်တော် ချြတ္ခန်း” ဟင်…😖😖😖😖 ဦးဇင်းကလည်း ယေသ္ဓာရာချြတ္ခန်းနဲ့ ရာဟုလာမယ်တ္ခေျာြတ္ခန်း အတူတူပဲလေဘုရာ့။ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးလိုပဲလေဘုရာ့။
“အိမ်း….. မင်းပဲအျေပာကောင်းတယ်။ မင်းကိုဆြမ်းဟင်းျေပာင်းကပ္ခိုင်းတာကြေတာ့ ဘဲဥျပုတ္ကေနပြီး ဘဲဥခ်ဉ်ရျေဖစ်သြားတယ်…. ဥခ်င်းတော့ တူတူပဲလေ”😏😏😏😏😏
သမီးပြိုလေး (၃)ယောကျရှိတဲ့ ပွညျ့တနျဆာမိသားစုအိမျက သာလိကာ ဝယျမှေးမိလိုကျသောအခါ…….
သမီးပြိုလေး (၃) ယောကျရှိတဲ့ မိသားစု ပွညျ့တနျဆာအိမျက သာလိကာကို ဝယျမှေးမိလိုကျသောအခါ…
မလာတာနျော.. ပွညျ့တနျဆာ အိမျက သာလိကာ
အိမျထောငျစုတခုမှာ အိမျထောငျ ဦးစီးက ကိုဖကေငျြ တဲ့။ သူ့ဇနီးက မယဉျမွ ပါ။ သူတို့မှာ သမီးပြို ၃ယောကျရှိတယျ။
ဒါနဲ့ မယဉျမွက နလေ့ညျခငျး အပငျြးပွအေောငျ ဆိုပွီး အိမျမှာ စကားပွော တတျတဲ့ ကွကျတူရှေး။
ဒါမှမဟုတျ သာလိကာတကောငျ ဝယျမှေးထား ရငျ ကောငျးမှာပဲလို့ အကွံရတယျ။
ဒါနဲ့ ငှကျအရောငျးဆိုငျကို သှားတာပေါ့။ငှကျဆိုငျရောကျတော့ ငှကျမြိုးစုံ အလှပွထားတာ တှတေ့ယျ။ စကားပွောတတျတဲ့ ကွကျတူရှေး။
သာလိကာတှကေတော့ ဈေးအကွီးဆုံးပဲ။ သောငျးဂဏနျးခညျြးပဲ။ ၃သောငျး ၅သောငျး ဈေးရှိတယျ။
ဒီထဲမှာ သာလိကာတကောငျကို ၅ထောငျလို့ ထောငျဂဏနျးနဲ့ ဈေးပေါပေါခြိတျ ထားတာ တှတေ့ော့ မယဉျမွ အံ့သွသှားတယျ။ မယဉျမွက ဆိုငျရှငျကို မေးကွညျ့တယျ။
”ဒီသာလိကာက ဘာလို့ ဈေးပေါတာလဲ။ စကား မတတျ လို့လားရှငျ့”
”တတျသမှဗြာ။ တတျလှနျး လို့ ခကျတောငျ နသေေးတယျ””ဒါဖွငျ့ ဘာလို့ ဈေးပေါတာတုနျးရှငျ့”
”သူက အရငျက ပွညျ့တနျဆာအိမျမှာ နခေဲ့တာ လေ။ စကား ကတော့ ကွှယျပါရဲ့။ ပွောလိုကျတဲ့ စကားတှကေ အလနေတ်တောတှဆေိုတော့ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောငျးပဈမလို့ပါဗြာ”
မယဉျမွကတော့ ဈေးသကျသာတာကို သဘောကသြှားတယျ။ အိမျရောကျ မှ ပွုပွငျယူမယျ ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ဈေးပေါတဲ့ သာလိကာမကို ဝယျလာခဲ့တာပေါ့။
အိမျရောကျတာနဲ့ သာလိကာမကလညျး အစှမျး ပွတော့တာ ပါပဲ။
”အောငျမယျ။ မှေးထားတဲ့ ကောငျမလေးတှေ ကလညျး အသဈကလေးတှဟေဲ့။ အလုပျဖွဈဦးမှာပဲ”
သမီး၃ယောကျကလညျး သာလိကာမ အပွောကို သဘောကကြွတာပါပဲ။
အိမျထောငျဦးစီးဖွဈတဲ့ ကိုဖကေငျြကတော့ အလုပျမြားတဲ့သူမို့ မိုးကွီးခြုပျ မှ အိမျကိုပွနျရောကျလာပါတယျ။
သာလိကာမက ကိုဖကေငျြကိုလညျး နှုတျဆကျတာပါပဲ။”အလို- ကိုဖကေငျြပါလား”
သာလိကာမက နာမညျနဲ့တကှ နှုတျဆကျလိုကျတော့ ကိုဖကေငျြ အံ့သွသှား တာပေါ့။
မယဉျမွနဲ့ သမီး၃ယောကျလညျး အံ့သွ သှားကွတယျ။ အဲဒီတုနျးမှာ သာလိကာမက ဆကျပွောလိုကျပါတယျ။
”ကိုဖကေငျြ ရှငျက ဒီ ‘ဘိ’ကိုလညျး လာတာပဲနျော” တဲ့။မှတျကရောဟ…။
သမီးပျိုလေး (၃) ယောက်ရှိတဲ့ မိသားစု ပြည့်တန်ဆာအိမ်က သာလိကာကို ဝယ်မွေးမိလိုက်သောအခါ…
မလာတာနော်.. ပြည့်တန်ဆာ အိမ်က သာလိကာ
အိမ်ထောင်စုတခုမှာ အိမ်ထောင် ဦးစီးက ကိုဖေကျင် တဲ့။ သူ့ဇနီးက မယဉ်မြ ပါ။ သူတို့မှာ သမီးပျို ၃ယောက်ရှိတယ်။
ဒါနဲ့ မယဉ်မြက နေ့လည်ခင်း အပျင်းပြေအောင် ဆိုပြီး အိမ်မှာ စကားပြော တတ်တဲ့ ကြက်တူရွေး။
ဒါမှမဟုတ် သာလိကာတကောင် ဝယ်မွေးထား ရင် ကောင်းမှာပဲလို့ အကြံရတယ်။
ဒါနဲ့ ငှက်အရောင်းဆိုင်ကို သွားတာပေါ့။ငှက်ဆိုင်ရောက်တော့ ငှက်မျိုးစုံ အလှပြထားတာ တွေ့တယ်။ စကားပြောတတ်တဲ့ ကြက်တူရွေး။
သာလိကာတွေကတော့ ဈေးအကြီးဆုံးပဲ။ သောင်းဂဏန်းချည်းပဲ။ ၃သောင်း ၅သောင်း ဈေးရှိတယ်။
ဒီထဲမှာ သာလိကာတကောင်ကို ၅ထောင်လို့ ထောင်ဂဏန်းနဲ့ ဈေးပေါပေါချိတ် ထားတာ တွေ့တော့ မယဉ်မြ အံ့သြသွားတယ်။ မယဉ်မြက ဆိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်တယ်။
”ဒီသာလိကာက ဘာလို့ ဈေးပေါတာလဲ။ စကား မတတ် လို့လားရှင့်”
”တတ်သမှဗျာ။ တတ်လွန်း လို့ ခက်တောင် နေသေးတယ်””ဒါဖြင့် ဘာလို့ ဈေးပေါတာတုန်းရှင့်”
”သူက အရင်က ပြည့်တန်ဆာအိမ်မှာ နေခဲ့တာ လေ။ စကား ကတော့ ကြွယ်ပါရဲ့။ ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေက အလေနတ္တောတွေဆိုတော့ ဈေးပေါပေါနဲ့ ရောင်းပစ်မလို့ပါဗျာ”
မယဉ်မြကတော့ ဈေးသက်သာတာကို သဘောကျသွားတယ်။ အိမ်ရောက် မှ ပြုပြင်ယူမယ် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဈေးပေါတဲ့ သာလိကာမကို ဝယ်လာခဲ့တာပေါ့။
အိမ်ရောက်တာနဲ့ သာလိကာမကလည်း အစွမ်း ပြတော့တာ ပါပဲ။
”အမယ်- ငါနေရမယ့် ”ဘိ”ကလည်း အသစ်။ ငါ့သခင်မကြီးကလည်း အသစ်ပဲဟဲ့”သာလိကာမအပြောကို မယဉ်မြ သဘောကျသွားတယ်။
”အောင်မယ်။ မွေးထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကလည်း အသစ်ကလေးတွေဟဲ့။ အလုပ်ဖြစ်ဦးမှာပဲ”
သမီး၃ယောက်ကလည်း သာလိကာမ အပြောကို သဘောကျကြတာပါပဲ။
အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ ကိုဖေကျင်ကတော့ အလုပ်များတဲ့သူမို့ မိုးကြီးချုပ် မှ အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်။
သာလိကာမက ကိုဖေကျင်ကိုလည်း နှုတ်ဆက်တာပါပဲ။”အလို- ကိုဖေကျင်ပါလား”
သာလိကာမက နာမည်နဲ့တကွ နှုတ်ဆက်လိုက်တော့ ကိုဖေကျင် အံ့သြသွား တာပေါ့။
မယဉ်မြနဲ့ သမီး၃ယောက်လည်း အံ့သြ သွားကြတယ်။ အဲဒီတုန်းမှာ သာလိကာမက ဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။
”ကိုဖေကျင် ရှင်က ဒီ ‘ဘိ’ကိုလည်း လာတာပဲနော်” တဲ့။မှတ်ကရောဟ…။
အပြိုကွီးတှေ အလို ရှိသော ယောင်ျကြား
October 17, 2021 October 16, 2021 by Zaw Hein
ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မိန်းမကင်းရှင်းသောသူ အလိုရှိသည်ဟု အပျိုကြီးတစ်ယောက် သတင်းစာထဲတွင် ကြေညာထည့်သည်။
တစ်ကိုယ်လုံး အရက်နံ့ထွက်နေပြီး လက်ထဲတွင် စီးကရက်ကိုင်ထားသော လူတစ်ယောက် ရောက်လာသည်။
အပျိုကြီးကမေးသည် ”ဘာကိစ္စလဲ” ”သတင်းစာထဲမှာကြေညာထားတဲ့ကိစ္စ”
“ဪ ရှင်အရက်မသောက်တတ်ဘူးလား” ”မိုးလင်းမိုးချုပ် တစ်နေကုန်သောက်တယ်”
”ဆေးလိပ်တော့မသောက်ဘူးမလား” ”ဘယ်ကလာ.. သောက်တာမှ မီးခိုးခေါင်းတိုင်လိုပဲ တနေ့ငါးဘူးလောက် ကုန်တယ်”
”ဒါဖြင့်မိန်းမတော့ ကင်းရှင်းတယ်ဟုတ်” ”ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ.. မိန်းမဆို ပျိုပျို အိုအို လာထားပဲ”
”ခင်ဗျား ကျုပ်ကို လုံးဝမမျှော်လင့်နဲ့လို့ လာပြောတာ”
ဆေးလိပ်၊ အရက်၊ မိန်းမကင်းရွင်းသောသူ အလိုရွိသည်ဟု အပ်ိုကြီးတစ်ယောက် သတင်းစာထဲတြင် ကြေညာထည့်သည်။
တစ္ကိုယ္လုံး အရက္နံ့ထြက်နေပြီး လက္ထဲတြင် စီးကရက္ကိုင္ထားသော လူတစ်ယောက် ရောက္လာသည်။
အပ်ိုကြီးကေမးသည် ”ဘာကိစ္စလဲ” ”သတင်းစာထဲမွာကြေညာထားတဲ့ကိစ္စ”
“ဪ ရွင်အရက္မေသာက္တတ္ဘူးလား” ”မိုးလင်းမိုးခ်ုပ် တစ်နေကုန်သောက္တယ်”
”ဆေးလိပ်တော့မေသာက္ဘူးမလား” ”ဘယ္ကလာ.. သောက္တာမွ မီးခိုးခေါင်းတိုင္လိုပဲ တေန့ငါးဘူးလောက် ကုန္တယ်”
”ဒျါဖင့်မိန်းမေတာ့ ကင်းရွင်းတယ်ဟုတ်” ”ပေါက်ပေါက်ရွာရွာ.. မိန်းမဆို ပ်ိုပ်ို အိုအို လာထားပဲ”
”ခင္ဗ်ား က်ုပ္ကို လုံးဝမေမွ်္လာင့်နဲ့လို့ လျာေပာတာ”
အိမျထောငျ (၃) ခါကဖြူးတယျ ဒါပမေယျ့ အခုအခြိနျထိ အပြိုစငျ ပဲရှိသေးတယျဆိုတဲ့ မိနျးကလေး
အိမျထောငျ သုံးခါကဖြူးတဲ့ အမြုိးသမီး တဈယောကျ ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့သူဟာ ခုခြိနျထိ အပြိုစငျ ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယျတဲ့။ ထူးဆနျး နတောပေ့ါ နျော
ဒါနဲ့ သတငျးထောကျ တဈယောကျက သှားပွီး အငျတာဗြူး တယျ… ….
အမကွီးရယျ…. အိမျထောငျ သုံးခါ ကတြာတောငျ အပြိုစငျပဲ ဆိုတော့
ဘာ့ကွောငျ့လဲ ဆိုတာ သိပါရစေ လို့ မေးလိုကျတော့ …..
ဒီလိုပါ… ပထမ ယူတဲ့ အမြိုးသား က သှေးတိုး ရောဂါ ရှိတယျ၊ မင်ျဂလာဦင်္း ည မှာ
သူငယျခငျြး တှနေဲ့ အပြျော လှနျပွီး မူးလိုကျတာ ဦးနှောကျ သှေးကွော ပွတျပွီး သပေါ လရေေ
အျော…. ဒုတိယ အိမျထောငျ ကတြော့ရော…
ဒုတိယ ယူတဲ့ စဈဗိုလျလေး က မင်ျဂလာဆောငျတဲ့ နပေဲ့ ရှတေ့နျး ထှကျသှားတာ၊ ပွနျမလာ တော့ဘူးလေ …..အျော… နောကျဆုံး တဈယောကျရော…
မင်ျဂလာဦး ညမှာပဲ ကှဲသှား ပွနျတာလား ခုထိ ပေါငျးနပေါသေးတယျ ကှယျ ဒါ… ဒါဆို ဘယျလို ဖွဈလို့..???
သူက… ဖစျေ့ဘုတျ ခရဇေီလေ၊ မင်ျဂလာ ဆောငျပွီး ကတညျးက
ညဘကျ ညဘကျ မအိပျတနျး ဖစျေ့ဘုတျ ထဲခညျြးပဲ ဝငျနတော၊
ခုထိ မမ အလှညျ့ မရောကျသေးဘူးကှယျ
ဖွဈမှ ဖွဈရလေ မမရယျ….ရယျမောခွငျးဖွငျ့ ဘ၀ အမောတှေ ပွနေိုငျကွပါစေ။
အိမ်ထောင် သုံးခါကျဖူးတဲ့ အမျုိးသမီး တစ်ယောက် ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူဟာ ခုချိန်ထိ အပျိုစင် ဘဝမှာပဲ ရှိသေးတယ်တဲ့။ ထူးဆန်း နေတာပေ့ါ နော်
ဒါနဲ့ သတင်းထောက် တစ်ယောက်က သွားပြီး အင်တာဗျူး တယ်… ….
အမကြီးရယ်…. အိမ်ထောင် သုံးခါ ကျတာတောင် အပျိုစင်ပဲ ဆိုတော့
ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတာ သိပါရစေ လို့ မေးလိုက်တော့ …..
ဒီလိုပါ… ပထမ ယူတဲ့ အမျိုးသား က သွေးတိုး ရောဂါ ရှိတယ်၊ မင်္ဂလာဦင်္း ည မှာ
သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ အပျော် လွန်ပြီး မူးလိုက်တာ ဦးနှောက် သွေးကြော ပြတ်ပြီး သေပါ လေရေ
အော်…. ဒုတိယ အိမ်ထောင် ကျတော့ရော…
ဒုတိယ ယူတဲ့ စစ်ဗိုလ်လေး က မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ နေ့ပဲ ရှေ့တန်း ထွက်သွားတာ၊ ပြန်မလာ တော့ဘူးလေ …..အော်… နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ရော…
မင်္ဂလာဦး ညမှာပဲ ကွဲသွား ပြန်တာလား ခုထိ ပေါင်းနေပါသေးတယ် ကွယ် ဒါ… ဒါဆို ဘယ်လို ဖြစ်လို့..???
သူက… ဖေ့စ်ဘုတ် ခရေဇီလေ၊ မင်္ဂလာ ဆောင်ပြီး ကတည်းက
ညဘက် ညဘက် မအိပ်တန်း ဖေ့စ်ဘုတ် ထဲချည်းပဲ ဝင်နေတာ၊
ခုထိ မမ အလှည့် မရောက်သေးဘူးကွယ်
ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ မမရယ်….ရယ်မောခြင်းဖြင့် ဘ၀ အမောတွေ ပြေနိုင်ကြပါစေ။
ဦးဆိုရငျ ကွောကျနရေသညျ …. ဖုနျးဝငျလာလို့ ကောကျကိုငျ လိုကျတာ ဖဘေု့တျ ပျေါ မှာ မနကေ့မှ ခဈြသူ ဖွဈသှားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုနျးဖွဈနတေော့ ကြုပျ ပြျော သှားတယျ။
“ဦး” “ပွော ခလိနျး” “ဦး ပြျောလို့ရပွီ သိလား” ခြိနျးတှေ့ တော့မယျ ထငျတယျလို့ တှေး မိပွီး ကြုပျ ပီတိတှေ ဖြာနေ မိတယျ ။ “အှနျး ဘာလို့လဲ” “ခလိနျးမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယျဝနျ ရှိနပွေီလေ”
“ဖူးးးးးး ” သောကျနတေဲ့ ကျောဖီ တောငျ ပါးစပျက ပွနျထှကျ ကုနျတယျ။ လခှမျးမှပဲ။“ဟဲ့ နပေါဦး ခလိနျး ဘာပွော” “ခလိနျးမှာ ဦး နဲ့ ရတဲ့ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလို့ ခဈခဈ” “ဟယျ ဘယျ့နှာ လုပျ ကိုယျဝနျ ရှိနသေတုနျး နငျနဲ့ငါ အပွငျမှာလညျး တဈခါမှ မတှဖေူ့းပဲနဲ့”
ဖဘေု့တျပျေါ ရညျးစားထားတဲ့ တဏှာတဈကွောခုတော့ အဲ့ ကလေးမကို ဘလော့လိုကျ ရတယျ။ ဖုနျးနံပတျ ကို ဘလကျလဈထဲ ထညျ့ရတယျ ။ ဦး ဆိုတဲ့ ချေါသံကွားရငျ အခုထိ ကွကျသီး တဖွနျးဖွနျး ထတုနျး။
နငျ့မကေလှားမှပဲ။ဖဘေု့တျပျေါ ရညျးစားထားတဲ့ တဏှာတဈကွောခုတော့ အဲ့ ကလေးမကို ဘလော့လိုကျ ရတယျ။ ဖုနျးနံပတျ ကို ဘလကျလဈထဲ ထညျ့ရတယျ ။
ဦး ဆိုတဲ့ ချေါသံကွားရငျ အခုထိ ကွကျသီး တဖွနျးဖွနျး ထတုနျး။ နငျ့မကေလှားမှပဲ။ဖဘေု့တျပျေါ ရညျးစားထားတဲ့ တဏှာတဈကွောခုတော့ အဲ့
ကလေးမကို ဘလော့လိုကျ ရတယျ။ ဖုနျးနံပတျ ကို ဘလကျလဈထဲ ထညျ့ရတယျ ။ ဦး ဆိုတဲ့ ချေါသံကွားရငျ အခုထိ ကွကျသီး တဖွနျးဖွနျး ထတုနျး။ နငျ့မကေလှားမှပဲ။
ဦးဆိုရင် ကြောက်နေရသည် …. ဖုန်းဝင်လာလို့ ကောက်ကိုင် လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ် မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူ ဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော် သွားတယ်။
“ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့ တော့မယ် ထင်တယ်လို့ တွေး မိပြီး ကျုပ် ပီတိတွေ ဖျာနေ မိတယ် ။ “အွန်း ဘာလို့လဲ” “ခလိန်းမှာ ဦးနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန် ရှိနေပြီလေ”
“ဖူးးးးးး ” သောက်နေတဲ့ ကော်ဖီ တောင် ပါးစပ်က ပြန်ထွက် ကုန်တယ်။ လခွမ်းမှပဲ။“ဟဲ့ နေပါဦး ခလိန်း ဘာပြော” “ခလိန်းမှာ ဦး နဲ့ ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလို့ ခစ်ခစ်” “ဟယ် ဘယ့်နှာ လုပ် ကိုယ်ဝန် ရှိနေသတုန်း နင်နဲ့ငါ အပြင်မှာလည်း တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပဲနဲ့”
ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရည်းစားထားတဲ့ တဏှာတစ်ကြောခုတော့ အဲ့ ကလေးမကို ဘလော့လိုက် ရတယ်။ ဖုန်းနံပတ် ကို ဘလက်လစ်ထဲ ထည့်ရတယ် ။ ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထတုန်း။
နင့်မေကလွှားမှပဲ။ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရည်းစားထားတဲ့ တဏှာတစ်ကြောခုတော့ အဲ့ ကလေးမကို ဘလော့လိုက် ရတယ်။ ဖုန်းနံပတ် ကို ဘလက်လစ်ထဲ ထည့်ရတယ် ။
ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထတုန်း။ နင့်မေကလွှားမှပဲ။ဖေ့ဘုတ်ပေါ် ရည်းစားထားတဲ့ တဏှာတစ်ကြောခုတော့ အဲ့
ကလေးမကို ဘလော့လိုက် ရတယ်။ ဖုန်းနံပတ် ကို ဘလက်လစ်ထဲ ထည့်ရတယ် ။ ဦး ဆိုတဲ့ ခေါ်သံကြားရင် အခုထိ ကြက်သီး တဖြန်းဖြန်း ထတုန်း။ နင့်မေကလွှားမှပဲ။
အပြိုကွီး မမနဲ့ တဈည အိပျလိုကျမိတဲ့ ဟျောတယျ ဝနျထမျးရဲ့ဖွဈရပျ😂
အပြိုကွီးမမ တဈယောကျဟာ သူ့ မှေးနအေ့တှကျ အကောငျးစား ဟိုတယျတဈခုမှာ
တဈယောကျတညျး ဇိမျကကြ သှားတညျးပွီး ကုနျဆုံး စလေိုကျပါတယျ ။
နောကျတဈနမှေ့ာ ဟိုတယျကနေ ပွနျဖို့ ငှရှေငျးတော့ အခနျးခ က ဒျေါလာ ၂၅၀ တောငျ ဖွဈနတေယျ ။
အဲ့ဒါနဲ့ ဈေးအရမျး မြားနတောမို့ အပြိုကွီးက ဟိုတယျဝနျထမျးနဲ့ အငွငျးအခုံဖွဈ စကားမြားနတေဲ့
အခြိနျမှာပဲ ပွသနာကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ ဟိုတယျမနျနဂြော ရောကျလာတယျ။
“ကြှနျတျောတို့ ဟိုတယျမှာ ဧညျ့သညျအတှကျ ပေးထားတဲ့ ဝနျဆောငျမှုတှေ အမြားကွီးပဲလေ .. အဈမကွီးရယျ။
Spa ၊ ရကေူးကနျ၊ အားကစားခနျးမတှကေို အခမဲ့ အသုံးပွုလို့ရပါတယျ…
အဲဒီအတှကျ ဝနျဆောငျခတှကေို အခနျးခထဲမှာ ထညျ့ပေါငျးထားပွီးသားပါခငျဗြာ”
“ဒါပမေဲ့ ကြှနျမ အဲဒါတှကေို တဈခုမှ မသုံးဘူးလေ။ ဒီတော့ ဘာလို့ အဲ့ဒါတှအေတှကျ ပိုကျဆံပေးရမှာလဲ”
“ဒါကတော့ အဈမကွီး အမှားပဲလေ။ သုံးသုံး မသုံးသုံး ပေးရမှာပါခငျဗြာ ”
မနျနဂြောစကားအဆုံးမှာ အမြိုးသမီးက ဒျေါလာ ၅၀ တနျ ခကျြလကျမှတျ တဈစောငျကို လှမျးပေးလိုကျတယျ
“အခနျးခက ဒျေါလာ ၅၀ မဟုတျဘူး ခငျဗြ ဒျေါလာ ၂၅၀ ပါ”
“ဟုတျပါတယျ။ ဒျေါလာ ၂၀၀ နုတျလိုကျတာက ကြှနျမနဲ့ တဈည လာအိပျခက ဒျေါလာ ၂၀၀ မို့ပါ”
“အဈမကွီးနဲ့ ဘယျသူမှ လာမှ မအိပျတာ”
“ဒါကတော့ ရှငျ့အမှားပဲလေ တဈညလုံး ဒီဟိုတယျက အခနျးထဲမှာ ကမြ ရှိနတော ၊ရှငျ သိနတောပဲလေ ရှငျ့ဟာရှငျ လာမအိပျတာ.
အဲဒီအတှကျ ကြှနျမစိတျမကောငျးပါဘူး သှားလိုကျအုနျးမယျ နျော ”
” ငွဲ ”
အပျိုကြီးမမ တစ်ယောက်ဟာ သူ့ မွေးနေ့အတွက် အကောင်းစား ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ
တစ်ယောက်တည်း ဇိမ်ကျကျ သွားတည်းပြီး ကုန်ဆုံး စေလိုက်ပါတယ် ။
နောက်တစ်နေ့မှာ ဟိုတယ်ကနေ ပြန်ဖို့ ငွေရှင်းတော့ အခန်းခ က ဒေါ်လာ ၂၅၀ တောင် ဖြစ်နေတယ် ။
အဲ့ဒါနဲ့ ဈေးအရမ်း များနေတာမို့ အပျိုကြီးက ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းနဲ့ အငြင်းအခုံဖြစ် စကားများနေတဲ့
အချိန်မှာပဲ ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ဟိုတယ်မန်နေဂျာ ရောက်လာတယ်။
“ကျွန်တော်တို့ ဟိုတယ်မှာ ဧည့်သည်အတွက် ပေးထားတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အများကြီးပဲလေ .. အစ်မကြီးရယ်။
Spa ၊ ရေကူးကန်၊ အားကစားခန်းမတွေကို အခမဲ့ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်…
အဲဒီအတွက် ဝန်ဆောင်ခတွေကို အခန်းခထဲမှာ ထည့်ပေါင်းထားပြီးသားပါခင်ဗျာ”
“ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အဲဒါတွေကို တစ်ခုမှ မသုံးဘူးလေ။ ဒီတော့ ဘာလို့ အဲ့ဒါတွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးရမှာလဲ”
“ဒါကတော့ အစ်မကြီး အမှားပဲလေ။ သုံးသုံး မသုံးသုံး ပေးရမှာပါခင်ဗျာ ”
မန်နေဂျာစကားအဆုံးမှာ အမျိုးသမီးက ဒေါ်လာ ၅၀ တန် ချက်လက်မှတ် တစ်စောင်ကို လှမ်းပေးလိုက်တယ်
“အခန်းခက ဒေါ်လာ ၅၀ မဟုတ်ဘူး ခင်ဗျ ဒေါ်လာ ၂၅၀ ပါ”
“ဟုတ်ပါတယ်။ ဒေါ်လာ ၂၀၀ နုတ်လိုက်တာက ကျွန်မနဲ့ တစ်ည လာအိပ်ခက ဒေါ်လာ ၂၀၀ မို့ပါ”
“အစ်မကြီးနဲ့ ဘယ်သူမှ လာမှ မအိပ်တာ”
“ဒါကတော့ ရှင့်အမှားပဲလေ တစ်ညလုံး ဒီဟိုတယ်က အခန်းထဲမှာ ကျမ ရှိနေတာ ၊ရှင် သိနေတာပဲလေ ရှင့်ဟာရှင် လာမအိပ်တာ.
အဲဒီအတွက် ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူး သွားလိုက်အုန်းမယ် နော် ”
” ငြဲ ”
လကျထပျပွီးတာမကွာသေးသောလငျမယား၂ ယောကျ အိမျရှမှေ့ာ အေးအေးလူလုထိုငျစကားပွောနတေုနျး ခွံရှမှေ့ာအဘိုးကွီးတယောကျ လာရပျကာ သမီး ဘကွီးဆီခဏလောကျကှယျမိနျးမဖွဈသူက ဘကွီးအိမျလိပျစာမေးခငျြလို့ ထငျပါရဲ့ဟု ထိုငျရာကထသှားတော့…
အဘိုးကွီးကဒီလိုပါသမီးရယျ ဘကွီးပွောတာ ဘယျသူ့မှပွနျမပွောပါနဲ့ အဘိုးကွီးက ထိုမြှသာပွောကာ သူတို့အိမျရှကေ့ ဆကျလကျထှကျခှာသှားလရော
မိနျးမဖွဈသူမှာ ဘာကိုနားလညျရမှနျးမသိဘဲ သူ့ယောကျြားဘေး ပွနျလာထိုငျလသေညျမိနျးမ ဟိုဘကွီးက ဘာပွောသှားတာလဲ
အျော သူပွောတာ ဘယျသူ့မှပွနျမပွောပါနဲ့တဲ့အေးလေ ဒါတော့ဒါပေါ့ ဒါပမေဲ့ မငျးနဲ့ငါက ခဈြလို့ယူထားတဲ့လငျမယားဘဲ ငါ့တော့ပွောပွ သငျ့ပါတယျ
အငျးပါမောငျရဲ့ဘကွီးကသူပွောတာ ဘယျသူ့မှမပွောပါနဲ့တဲ့မဟုတျသေးဘူးလကှော တခွားသူတော့မပွောနဲ့ပေါ့ငါ့ကမငျးလငျလေ ငါ့ကိုတော့…
မငျးမပွောဘဲနလေို့ရမလားဘာလဲဒီအဘိုးကွီးက မငျးနဲ့မကငျးမရှငျးဖွဈဘူးလို့လားရှငျနျော စကားပွောရငျကွညျ့ပွော လူကိုမစျောကားနဲ့ အဲဒီဘကွီးက သူပွောတာ
ဘယျသူ့မှမပွောပါနဲ့ တဲ့ဆိုမှ ကမြက ဘာထပျ ပွောရဦးမှာလဲဟေ့ ဒီမယျ ငါကနငျ့လငျနျော ငါမေးရငျ နငျပွောကိုပွောရမယျ မပွောရငျ နငျလငျငယျ နလေို့ဘဲ
အံမယျရှငျကမြား ကမြကိုစျောစျောကားကား ရှငျသာကမြနဲ့ မယူခငျ အေးခငျတို့ မွမူတို့နဲ့ဖွဈခဲ့တာ မသိဘူးထငျနလေား
နငျကော လှရှတေို့ သောငျးအေးတို့နဲ့ ကငျးလို့လားရှငျမသဒီရငျ မပေါငျးနဲ့လအေေးမပေါငျးဘူးဟေ့ ကှာမယျ လာတရားရုံးသှားမယျအိုကွာသလားလို့…
စာဖတျသူမြားခငျဗြာ သူမြားလငျမယား ပွဿနာတကျအောငျ ပွောသှားသောထိုအဘကွီးအားတှရှေိ့ပါက အကွောငျးကွားပေးကွပါရနျ တျောတျောမှတေဲ့ အဘ ကှာ
အခုလိုအခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျးသာယာပြျောရှငျသောနလေ့ေးကိုပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…
လက်ထပ်ပြီးတာမကြာသေးသောလင်မယား၂ ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ အေးအေးလူလုထိုင်စကားပြောနေတုန်း ခြံရှေ့မှာအဘိုးကြီးတယောက် လာရပ်ကာ သမီး ဘကြီးဆီခဏလောက်ကွယ်မိန်းမဖြစ်သူက ဘကြီးအိမ်လိပ်စာမေးချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ဟု ထိုင်ရာကထသွားတော့…
အဘိုးကြီးကဒီလိုပါသမီးရယ် ဘကြီးပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့ အဘိုးကြီးက ထိုမျှသာပြောကာ သူတို့အိမ်ရှေ့က ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေရာ
မိန်းမဖြစ်သူမှာ ဘာကိုနားလည်ရမှန်းမသိဘဲ သူ့ယောက်ျားဘေး ပြန်လာထိုင်လေသည်မိန်းမ ဟိုဘကြီးက ဘာပြောသွားတာလဲ
အော် သူပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့အေးလေ ဒါတော့ဒါပေါ့ ဒါပေမဲ့ မင်းနဲ့ငါက ချစ်လို့ယူထားတဲ့လင်မယားဘဲ ငါ့တော့ပြောပြ သင့်ပါတယ်
အင်းပါမောင်ရဲ့ဘကြီးကသူပြောတာ ဘယ်သူ့မှမပြောပါနဲ့တဲ့မဟုတ်သေးဘူးလေကွာ တခြားသူတော့မပြောနဲ့ပေါ့ငါ့ကမင်းလင်လေ ငါ့ကိုတော့…
မင်းမပြောဘဲနေလို့ရမလားဘာလဲဒီအဘိုးကြီးက မင်းနဲ့မကင်းမရှင်းဖြစ်ဘူးလို့လားရှင်နော် စကားပြောရင်ကြည့်ပြော လူကိုမစော်ကားနဲ့ အဲဒီဘကြီးက သူပြောတာ
ဘယ်သူ့မှမပြောပါနဲ့ တဲ့ဆိုမှ ကျမက ဘာထပ် ပြောရဦးမှာလဲဟေ့ ဒီမယ် ငါကနင့်လင်နော် ငါမေးရင် နင်ပြောကိုပြောရမယ် မပြောရင် နင်လင်ငယ် နေလို့ဘဲ
အံမယ်ရှင်ကများ ကျမကိုစော်စော်ကားကား ရှင်သာကျမနဲ့ မယူခင် အေးခင်တို့ မြမူတို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာ မသိဘူးထင်နေလား
နင်ကော လှရွှေတို့ သောင်းအေးတို့နဲ့ ကင်းလို့လားရှင်မသဒီရင် မပေါင်းနဲ့လေအေးမပေါင်းဘူးဟေ့ ကွာမယ် လာတရားရုံးသွားမယ်အိုကြာသလားလို့…
စာဖတ်သူများခင်ဗျာ သူများလင်မယား ပြဿနာတက်အောင် ပြောသွားသောထိုအဘကြီးအားတွေ့ရှိပါက အကြောင်းကြားပေးကြပါရန် တော်တော်မွှေတဲ့ အဘ ကွာ
အခုလိုအချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
အဖှားအိုတဈဦး ဘဏျတှငျငှလောအပျသညျ။ ငှပေမာဏက အလှနျမြားသဖွငျ့ ဘဏျမနျနဂြောကမေးသညျ။
“အဘှားအဲ့လောကျငှအေမြားကွီး ဘယျလိုရှာလာတာလဲ” “ဩျောလောငျးကစားလုပျလို့ နိုငျလာတာပါ” “အာမဖွဈနိုငျပါဘူး လူတဈယောကျက အမွဲကံကောငျးပါ့မလား”
“မယုံရငျမငျးနဲ့ငါနဲ့လောငျးမလား တနင်ျလာနဘေ့ဏျဖှငျ့ခြိနျရောကျရငျ မငျးဖငျမှာ tattoo ထိုးပွီးသားဖွဈနရေမယျ” “အာဘာလို့ tattoo ထိုးရမလဲ လောငျးမယျဗြာဘာကွေးလဲ”
“ဒျေါလာ ၅၀၀ ကွေးလောငျးမယျ” “ရတယျစိနျလိုကျ” တနင်ျလာနမေ့နကျစောစော အဖှားအိုဘဏျသို့ရောကျလာသညျ။
မွို့မကျြနှာဖုံး လူကွီး ၂ ယောကျခနျ့လညျးပါလာသညျ။ “ကဲမနျနဂြော မငျးဖငျမှာတကျတူးထိုးထားတယျမဟုတျလား” “ဘာမှ မထိုးထားဘူးဒီမှာကွညျ့”
မနျနဂြောက ဘောငျးဘီကိုခြှတျပွရငျးပွောသညျ။ ထိုစဉျအဖှားအိုနှငျ့ အတူပါလာသညျ့လူတဈဦး မူးလဲကသြှားသညျ။
“ကဲအဖှားရှုံးပွီ ဒျေါလာ ၅၀၀ ပေးတော့ ဒါနဲ့ဟိုလူကဘာလို့ မူးလဲသှားရတာလဲ” “ရော့ဒီမှာငါရှုံးတဲ့အတှကျ ဒျေါလာ ၅၀၀ ဟိုလူက ဘာလို့မူးလဲသှားတာလဲဆိုတော့ ဘဏျမနျနဂြောကွီး ဖငျလှနျပွမယျဆိုတာကို မယုံဘူးဆိုလို့ ဒျေါလာတဈသောငျးကွေးလောငျးထားမိလို့လေ” ‘ ဟိုကျ ‘
အဖွားအိုတစ်ဦး ဘဏ်တွင်ငွေလာအပ်သည်။ ငွေပမာဏက အလွန်များသဖြင့် ဘဏ်မန်နေဂျာကမေးသည်။
“အဘွားအဲ့လောက်ငွေအများကြီး ဘယ်လိုရှာလာတာလဲ” “ဩော်လောင်းကစားလုပ်လို့ နိုင်လာတာပါ” “အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး လူတစ်ယောက်က အမြဲကံကောင်းပါ့မလား”
“မယုံရင်မင်းနဲ့ငါနဲ့လောင်းမလား တနင်္လာနေ့ဘဏ်ဖွင့်ချိန်ရောက်ရင် မင်းဖင်မှာ tattoo ထိုးပြီးသားဖြစ်နေရမယ်” “အာဘာလို့ tattoo ထိုးရမလဲ လောင်းမယ်ဗျာဘာကြေးလဲ”
“ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကြေးလောင်းမယ်” “ရတယ်စိန်လိုက်” တနင်္လာနေ့မနက်စောစော အဖွားအိုဘဏ်သို့ရောက်လာသည်။
မြို့မျက်နှာဖုံး လူကြီး ၂ ယောက်ခန့်လည်းပါလာသည်။ “ကဲမန်နေဂျာ မင်းဖင်မှာတက်တူးထိုးထားတယ်မဟုတ်လား” “ဘာမှ မထိုးထားဘူးဒီမှာကြည့်”
မန်နေဂျာက ဘောင်းဘီကိုချွတ်ပြရင်းပြောသည်။ ထိုစဉ်အဖွားအိုနှင့် အတူပါလာသည့်လူတစ်ဦး မူးလဲကျသွားသည်။
“ကဲအဖွားရှုံးပြီ ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပေးတော့ ဒါနဲ့ဟိုလူကဘာလို့ မူးလဲသွားရတာလဲ” “ရော့ဒီမှာငါရှုံးတဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၅၀၀ ဟိုလူက ဘာလို့မူးလဲသွားတာလဲဆိုတော့ ဘဏ်မန်နေဂျာကြီး ဖင်လှန်ပြမယ်ဆိုတာကို မယုံဘူးဆိုလို့ ဒေါ်လာတစ်သောင်းကြေးလောင်းထားမိလို့လေ” ‘ ဟိုက် ‘
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး နာရီစငျ မွနျမာပွညျမှာ ရှိနတောပဲကိုး
လှတောသားတဈယောကျ ဈေးဝယျဖို့ဝကျလကျမွို့ရောကျတော့ ဈေးထိပျနာရီစငျကွညျ့မိသတဲ့။
သူကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ နာရီစငျရဲ့အနောကျဖကျနာရီက ၉:၀၀ နာရီထိုးနသေတဲ့။
ဒါနဲ့ နာရီစငျကိုလကျယာရဈပတျပွီး မွောကျဖကျကနာရီကွညျ့တော့ ၁၂:၀၀ နာရီပွနသေတဲ့။
နာရီစငျကိုလကျယာရဈဆကျပတျပွီး အရှဖေ့ကျကနာရီကို ကွညျ့လိုကျတော့ ၃:၀၀ နာရီပွနသေတဲ့။
နာရီစငျကိုဆကျပတျပွီး တောငျဖကျကနာရီကိုကွညျ့လိုကျပွနျတော့ ၆:၀၀ နာရီထိုးနပွေီတဲ့။
ဒါနဲ့ ဈေးထဲဝငျဈေးမဝယျတော့ပဲ လှတောပွနျသှားသတဲ့။
“ဝကျလကျဈေးထိပျက နာရီစငျကွီး ကွီးခကျြကတော့ကှာ…
မနကျ ၀၉:၀၀ နာရီကပတျကွညျ့လိုကျတာ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီထိုးမှ တဈပတျပွညျ့သတဲ့”
ဖတျရှုသူ မြားအားလုံး ဘေးဘယာဝေးကှာပွီး စိတျနှလုံးရှငျလနျးကွပါစေ…။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နာရီစင် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတာပဲကိုး
လှတောသားတစ်ယောက် ဈေးဝယ်ဖို့ဝက်လက်မြို့ရောက်တော့ ဈေးထိပ်နာရီစင်ကြည့်မိသတဲ့။
သူကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နာရီစင်ရဲ့အနောက်ဖက်နာရီက ၉:၀၀ နာရီထိုးနေသတဲ့။
ဒါနဲ့ နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ပတ်ပြီး မြောက်ဖက်ကနာရီကြည့်တော့ ၁၂:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။
နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ဆက်ပတ်ပြီး အရှေ့ဖက်ကနာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၃:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။
နာရီစင်ကိုဆက်ပတ်ပြီး တောင်ဖက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ၆:၀၀ နာရီထိုးနေပြီတဲ့။
ဒါနဲ့ ဈေးထဲဝင်ဈေးမဝယ်တော့ပဲ လှတောပြန်သွားသတဲ့။
“ဝက်လက်ဈေးထိပ်က နာရီစင်ကြီး ကြီးချက်ကတော့ကွာ…
မနက် ၀၉:၀၀ နာရီကပတ်ကြည့်လိုက်တာ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီထိုးမှ တစ်ပတ်ပြည့်သတဲ့”
ဖတ်ရှုသူ များအားလုံး ဘေးဘယာဝေးကွာပြီး စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေ…။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နာရီစင် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတာပဲကိုး
လှတောသားတစ်ယောက် ဈေးဝယ်ဖို့ဝက်လက်မြို့ရောက်တော့ ဈေးထိပ်နာရီစင်ကြည့်မိသတဲ့။
သူကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နာရီစင်ရဲ့အနောက်ဖက်နာရီက ၉:၀၀ နာရီထိုးနေသတဲ့။
ဒါနဲ့ နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ပတ်ပြီး မြောက်ဖက်ကနာရီကြည့်တော့ ၁၂:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။
နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ဆက်ပတ်ပြီး အရှေ့ဖက်ကနာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၃:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။
နာရီစင်ကိုဆက်ပတ်ပြီး တောင်ဖက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ၆:၀၀ နာရီထိုးနေပြီတဲ့။
မနက် ၀၉:၀၀ နာရီကပတ်ကြည့်လိုက်တာ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီထိုးမှ တစ်ပတ်ပြည့်သတဲ့”
ဖတ်ရှုသူ များအားလုံး ဘေးဘယာဝေးကွာပြီး စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေ…။